Ndinokuudza. Iko kunyorera kugadzirisa nyaya mumutauro wemasaini | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Dhijitari nyika, Noticias
Haisi nhau nekuti yanga iri pamusika kwemakore mashoma, asi nhasi ndiri kuzvirumbidza. Ndinokuudza Ndicho application yemahara yakagadzirirwa vana nevakuru uye mavanogona nyore uye kunakidza kugadzirisa yavo nyaya mumutauro wemasaini wechiSpanish. Parizvino inowanikwa kune zvishandiso zvine system yekushandisa Android. Tinoziva zvishoma nezvake.
1 Yakagadzirwa na
4 Uye zvakare raibhurari
5 Zvimwe zviito
Iko kunyorera kwakagadzirwa ne CNSE Nheyo nerutsigiro rwemari rwe Ministry of Dzidzo, Tsika neMitambo. Icho chaive chirongwa chakarongedzwa mukati memutemo wechiito kukurudzira nekusimudzira kuverenga, ichinyanya kusimbisa vana matsi. Yakave zvakare yave iyo kutanga kuverenga digital kune matsi.
Chinangwa chiri kukurudzira tsika yekuverenga uye yekunyora zvinyorwa pakati pevana matsi nevechidiki kuburikidza nemutauro wemasaini wechiSpanish. Izvo zvakare zvinoda kufambisa basa remhuri uye nyanzvi munzvimbo ino.
Iko kunyorera kunoshanda nenzira yakafanana kune iro bhuku redhijitari kuverenga, asi zvakare rinobatanidza chakatarwa chikamu che gadzira uye gadzirisa ngano uye nyaya wega. Mukuwedzera, vanogona kuenzanisira ine mifananidzo, iyo inogona kuchengetwa yekutamba kakawanda sezvaunoda. Nekudaro, kwete kuverenga chete kunosimudzirwa, asiwo iyo zvinyorwa zvinyorwa pakati pehudiki nehudiki nekukanganiswa kwekunzwa. Uye idzo nyaya dzinogona kugoverwa nechero mushandisi uyo zvakare ane iyo application yakaiswa.
Uye zvakare raibhurari
Chirongwa inobvumidza kusanganisa mumaraibhurari nyaya dzakatoburitswa muSpanish, mutauro wemasaini wechiCastilian uye nemanyorerwo. Nyaya inosanganisirwa neyekutanga kurodha pasi Platero uye Me. Kubva pano, raibhurari iyi inogona kukura neshanduro nyowani dzakagadzirwa neCNSE Foundation kana nevashandisi vacho. Semuenzaniso, kune zvakare edhisheni yenyaya pfupi uye mabhuku akashandurwa mumutauro wemasaini senge Ngirozi yadonha, Mambokadzi wemakungwa o Zvinonakidza sei kudya michero!
Chekupedzisira pane zvimwe zviito mukushandisa kwe, semuenzaniso, iyo kushandurira mumutauro wemasaini wechiSpanish wenyaya nemitambo yevana Chemhondoro Celestine, Iyo Lazillo de Tormes, nhetembo dzaMiguel Hernández kana Ropa Muchato. Inobvumidzawo Kugadzirira kwemishandirapamwe, mapeji ewebhu uye magwara anotarisirwa kumhuri, nzvimbo dzekudzidzisa nemaraibhurari. Zvese nechinangwa chekuunza iri boka kumatenderedzwa evaverengi kuti vagone kugovana nekutora chikamu mune zvakajairika zviitiko.
TeCuento pasina mubvunzo yakawedzerwa kune iyo akawanda nhare mbozha izvo zviripo kutsigira matsi. Pakati pevamwe vanogona kusimbiswa EnglishDict, yeshanduro kubva kuChirungu kuenda kuSpanish uye kubva kuSpanish kuenda kuChirungu; Chiratidzo, iyo inoshandura kubva kuSpanish kuenda mumutauro wemasaini. KANA Matsi Mubatsiri, iyo inoshandura mazwi akataurwa kuita mameseji, uye zvakare iri yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Dhijitari nyika » Ndinokuudza. Iko kunyorera kugadzirisa nyaya mumutauro wemasaini
"Tractatus Logico-Philosophicus". Ndeapi vanyori vanogona kudzidza kubva kuWittgenstein. (II)